#OromoStruggle – Oduu adda addaa Guraandhala 28, 2017 – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
Qeerron Oromoo Diida’aa tooftaa qabsoo cimatti dhimma bahuuf yeroo wayyaanen humna waraanaa nurra qubachiistu cal’isnee wal ijaaruu eegalle. Humni waraana makkalaakayaan nurra qubatee ture guyyaa har’aa gadlakkisee baheera.
Kanaafuu ilmaan Oromoo bakka jirruu kaanee qabsoo eegalle itti fufuuf qophoofnee jirra.
1) Diinota Oromoo qeerroo Oromoo hiisisaa jiran irratti tarkaanfii ni fudhanna.
2) Qabeenya jaleewwan wayyaanee ni barbadeessina.
3) Ergamtoota wayyaanee ilmaan Oromoo amantiin walitti buusuf wayyaanef ergaman irratti tarkaanfii ni fudhanna.
Kana booda diinaf harka kenninee hin teenyu.
Oromoo bakka jirtanii dammaqaa. Via Oromiyaa Harmeekoo
Yeroo ammaa kana rakkoo gandummaa fakkeessuun Wayyaaneen Oromoo waliin dhahuuf akka malee hojjachaa jiraachuu odeeffannoon biyyarraa dhufte ni addeessiti. Akka himamutti basaastota 10,000 ol facebook irratti bobbaaftee jirti. Mallattoon jara ittiin beekan suuraalee goototaa fokkisuun akka waan Oromoon kutaa tokkoo kutaa biraa irratti duula bantee fakkeessuun gareetti addaan walqoodanii namoota hubannoo hin qabne duulchisaa jiraachuun himame. Fakkeenyaaf, suuraa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fokkisuun akka waan kutaan Arsii akkas godhe fakkeessanii Oromoo kutaa Harargee dallansiisuuf yaalaa jiru. Akkasumas suuraa Jene. Waaqoo Guutuu fokkisuun akka waan Oromoon kutaa Harargee fokkiftee fakkeessuun Oromoo kutaa Arsii dallansiisuuf yaalaa jiru. Comment keessattis garee qabachuun wal arrabsan. Maqaan jaraatis maqaa Sabboonaa fakkaatuu fi suuraan profile jaraatis akkuma Oromoo biraa fakkaata. Maqaa fi suuraan jara addaan beekuun waan ulfaatuuf gocha isaanii qofarraa kan hubachuun dandayamu. Sababa kanaaf, warri kana osoo hin hubatin, Share godhuudhaan dubbii oow’isu akka wal gorsinu warri keessa beekan biyyarraa nuu dhaamanii jiru.Via Ferhan Abdulselam https://www.youtube.com/watch?v=dMD9mvtORkg https://youtu.be/vmetlsOnvrc